Vhura Uroyi: Gungwa ++, chirahwe nezve tekinoroji uye mashiripiti | Linux Vakapindwa muropa
Vhura Uroyi: Gungwa ++, chirahwe nezve tekinoroji uye mashiripiti
Vhura Uroyi: Gungwa ++ ndeimwe yeaya mapikicha emavhidhiyo emitambo anoburitswa ayo achaburitsirwa Linux, Mac, uye Windows. Basa rakagadzirwa naAbhigail Corfman, mugadziri wemutambo weindie ari kupa zvakawanda zvekutaura nezvazvo nemabasa akaita seaya uye aunogona kuwana mukati Steam.
Iko kuvhurwa kwepamutemo kweOpen Sorcery: Gungwa ++ rave kuwanikwa, iine ruzivo rwunobva kune mamwe mazita e puzzle uye iyo inogadzirisa misoro senge mashiripiti uye tekinoroji. Kuenderera mberi kweOpen Sorcery iyo yakaita kuti ive yeIndiecade yekupedzisira muna2016, nekuda kweongororo dzakanaka dzawakagamuchira. Naizvozvo, kuburitswa kutsva kunovimbisawo zvakawanda ...
Uyu mutambo wevhidhiyo rakafuridzirwa neyekare franchise, senge iyo Zork uye Wishbringer akateedzana kubva kunguva yegoridhe yemitambo yeas adventure Zvakare, wedzera yazvino mushandisi mushandisi pamwe nekubata kwekufemerwa kwauchada, kunyanya kana iwe uchida indie mitambo yemavhidhiyo neimwe vintage touch.
Munyaya iyi, inotanga paunomuka uri pasi pegungwaWakakomberedzwa nendangariro dzako dzakaputsika Munguva yekushanya, iwe unozogona kushamwaridzana nemhando dzakasiyana dzezvisingaite zvisikwa uye neakawanda matambudziko ekukunda. Asi pasina kukanganwa kuisa pfungwa dzako dzese, nekuti kutyisidzira kwakawanda kwakamirira pasi pegungwa ...
Unogona kuvandudza zvitsinga nezvinhu zvaunogona kuunganidza, kuwedzera pakuve nazvo 19 nyika dzakaoma kudzoka kumuviri wako, uchifamba nemugungwa. Zvese zvakarongedzwa neyemazuva ano uye hunyowani hues, pamwe neicho chishuwo icho chinoita kuti iwe utore inoshamisa retro rwendo apo fungidziro yaive yakakosha. Uye zvakare, iwe uchaona huchenjeri hwemugadziri wayo, ruzivo rwake rwe software engineering, uye zvipo zvake zvehunyanzvi.
Uye, yeuka, kana iwe uchifarira Open Sorcery: Gungwa ++, unotoziva kuti inowanikwa pane Steam ye Mac, Windows, uye zvakare yeLinux...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Vhura Uroyi: Gungwa ++, chirahwe nezve tekinoroji uye mashiripiti
Windows inosiya 32-bit rutsigiro. Ndeupi mugove weLinux wekushandisa?
Iyo beta yeAlmaLinux, iyo CloudLinux imwe nzira yeCentOS, yakatoburitswa